पोस्ट ग्राजुएट थाल्दै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान — samadhannews.com
पोस्ट ग्राजुएट थाल्दै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
पोखरा, ६ माघ:
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आगामी वर्षदेखि पोस्ट ग्राजुएट (पिजी)को पढाइ थाल्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश नम्बर ४ को राजधानी पोखरास्थित क्षेत्रीय अस्पताललाई आधार बनाएर पोहोर स्थापना भएको प्रतिष्ठानले पिजी कक्षा सञ्चालनका लागि पाठ्यक्रम तयार गरिसकेको जनाएको छ ।
‘पिजीको कक्षा शुरु गर्न बनाएको पाठ्यक्रमलाई मान्यता दिन बाहिरबाट विषय विशेषज्ञ बोलाएर सम्पादन गर्न बाँकी छ,’ प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. बुद्धिबहादुर थापाले भने, ‘५ महिनापछि पिजी प्रोग्राम शुरु गर्छौं ।’ पढाइ शुरु गर्न मेडिकल काउन्सिलले भौतिक पूर्वाधार, बिरामी संख्या लगायतका मापदण्ड हेरेर विद्यार्थीको सिट संख्या तोक्ने डा. थापाले बताए ।
अध्ययन अध्यापन सञ्चालन गर्न अस्पतालमा अहिले कार्यरत डाक्टरलाई नै शिक्षकको रुपमा पनि लिने तयारी भइरहेको छ । अस्पतालमा विषय विशेषज्ञको अभाव भएको डा. थापाले जानकारी दिए । सरकारी स्तरबाट पढाइ शुरु भएपछि स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययनको पहुँच सर्वसाधारणमा पुग्ने उनको विश्वास छ । ‘हामीले पढाइ शुरु गरेपछि निकै सस्तोमा पढ्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘डाक्टरी पढ्न लाखौं खर्च गरिरहुनपर्दैन ।’
पिजी कक्षा सञ्चालन पश्चात नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ, एमबिबिएस लगायत कक्षा पनि सञ्चालनको तयारी थालिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । ५ सय बेड सञ्चालनको अनुमति रहेको क्षेत्रीय अस्पतालमा अहिले ३ सय ५० बेडमात्र छ । स्त्रीरोग तथा प्रसूतीका लागि छुट्टै भवन तयार भइरहेकाले उक्त भवन सञ्चालन आएपछि ५ सय बेडमा नै उपचारको व्यवस्था मिलाउने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
अस्पताल सञ्चालन, अध्ययन अध्यापन लगायत लागि कति जनशक्ति आवश्यक चाहिन्छ भन्नेबारे अध्ययनको तयारी समेत गरिएको छ । अस्पतालमा अहिले सरकारी ३ सय र आन्तरिक स्रोतबाट ३ सय जना कार्यरत छन् । अस्पतालको नाममा रहेको २ सय ७ रोपनी जग्गा अपुग हुने भएकाले थप जग्गा अधिग्रहणको तयारी समेत भएको उपकुलपति डा. थापाले जानकारी दिए । अहिले भएको जग्गाको थुपै भाग बाटोको कारण गुमेको छ ।
पोहोर फागुनमा उपकुलपति नियुक्त भएका थापाले जेठमा डा. नरेन्द्रकुमार गुरुङलाई डिननियुक्त गरेका थिए । हालसम्म प्रतिष्ठानको नियमावली बनाइसकेको र प्राज्ञिक परिषद समेत गठन गरिसकेको छ । यस्तै, प्रतिष्ठानका केही सभासद समेत चयन भइसकेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र योजना आयोगका स्वास्थ्य सचिव पदेन सभासद रहने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न र सर्वसाधारणलाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रतिष्ठान स्थापना भएको हो ।कक्षा सञ्चालनका लागि समेत विषय विशेषज्ञ आवश्यक पर्ने भन्दै प्रतिष्ठानले आगामी बजेटका कार्यक्रम बनाएर सरकारसँग विषय विशेषज्ञ माग गर्ने जनाएको छ ।
तत्कालका लागि नपुगेको जनशक्ति करारमा लिएर काम गर्ने जनाएको छ । प्रतिष्ठानले अस्पतालमा कार्यरत सबै कर्मचारीका लागि २० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय समेत गरेको छ । ‘अघिल्लो वर्ष झण्डै ९ करोड बचत देखिएपछि प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेका हौं,’ उपकुलपति डा. थापाले भने, ‘यसो गर्दा वार्षिक २ करोड खर्च हुने देखिन्छ ।’ अन्यत्र ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने अभ्यास रहेको उनले बताए । यस्तै, अस्पतालले सबै कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमासमेत गरिदिएको छ ।
सरकारले यो वर्ष प्रतिष्ठानलाई साढे ४ करोड बजेट पठाएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत उक्त बजेट आएपनि आगामी वर्षदेखि
प्रतिष्ठानको नाममा अर्थमन्त्रालय मार्फत नै बजेट आउने जनाएको छ । प्रतिष्ठान प्रदेश सरकार मातहत रहने वा संघीय सरकार मातहत रहने भन्नेबारे अहिलेसम्म स्पष्ट नभएको उपकुलपति डा. थापाले बताए । प्रदेशले स्थायीत्व नलिएसम्म प्रतिष्ठान संघीय सरकारकै मातहतमा रहनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको उनले सुनाए ।